Maxaa ka qaldan siyaasadda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, xageyna u socotaa? – Somali Top News
Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay kamid tahay waddamada muhiimka ah ee dhaca geeska Afrika, kullaala Badweynta Hindiya, talo iyo go’aanna ku leh Gacanka Cadmeed islamarkaana si togan iyo si tabanba u saameeyn kara isku xirka adduunka iyo socdaalka ganacsiga.
1: Illaalinta danaha iyo Qiyamka Soomaaliyeed
2: Horumarinta iyo hagaajinta danahaas.
Waajibka dowladda Federaalka ah ee Muqdisho fadihsa looga baahan yahay waa laba xi loo ay tahay in ay u gudato si deggan:
1: In aan Shatiga dowladnimada lagu dareemin habayaraatee dhibaato kadhan ah qof , Qolo iyo gobol Soomaaliyeed, taas macnaheedu waa in Kalluunka laga dhoofinayo Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo ay dowladda Soomaaliya uga helaan sharciyadda iyo shtiga si fudud xitaa haddii ay wax iskudiidan yihiin.
2: In aanay u baahan cid kale iyaga oo ka cararaya Muqdisho.
← Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay wafdi ka socda Qaramada Midoobay
After the free trade agreement, we need to focus on realizing the African Monetary Fund →
Sarkaal Shabaab Ah Oo Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho
Kenya Oo Geel 50 Neef Ah U Tababartay Ka Hortaga Weerarada Al Shabaab
Wasiir Goodax Barre oo falcelin adag kala kulmay madaxda iyo shacabka reer Puntland